FBSတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ပိုကောင်းသောကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာစေရန်နှင့် လိုအပ်နေသူများကို ကူညီနိုင်ရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်.
ဇန်န၀ါရီလအစောပိုင်းတါင် FBSဆိုးလ် ကိုရီးယားအဖွဲ့သည် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်. ဂမ်ဘီယာသည် အာဖရိကတိုက် အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး: ၂၀၁၆ခုနှစ်စာရင်းဇယားများအရဆိုလျှင် GDPပေါ်အခြေခံတွက်ပါက နိုင်ငံသားတစ်ဦးစီ၏ တစ်နှစ်တာ ပျှမ်းမျှဝင်ငွေသည် ၄၈၄ဒေါ်လာသာရှိရာ တစ်ရက်ပျှမ်းမျှဝင်ငွေ ၁. ၃၃ဒေါ်လာသာရရှိကြသည့်: ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. ထို့အပြင် နိုင်ငံသားများ၏ ပျှမ်းမျှကြွယ်ဝမှုမှာလည်း ၂၀၀၈က တစ်ရက်ဝင်ငွေ ပျှမ်းမျှ ၁. ၆၆ဒေါ်လာရှိခဲ့ရာ ယခုအခါ ပိုမိုကျဆင်းလာခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်.
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသားများသည် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီသောအစားအစာ၊ အ၀တ်အထည်၊ ပညာရေး၊ ဆေးဝါး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ မလုံလောက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်. အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့် ဝေးကွာသော ဒေသများမှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ရောက်၇ှိရန်အတွက် ပရဟိတအဖွဲ့အနေဖြင့် တစ်ပတ်ခန့်ပင် အချိန်ယူခဲ့ရပါသည်.
FBSဆိုးလ် ရုံးခွဲမှအဖွဲ့သားများသည် ဂမ်ဘီယာရှိ ကျေးလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို အကူအညီပေးရန်အတွက် နှစ်ရက်ကြာ သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်. ဂမ်ဘီယာရှိကျေးလက်လူထုသည် ဆင်းရဲစွာနေထိုင်ကြရသည့်အတွက် ဂမ်ဘီယာကလေးငယ်များ ပညာရေးအထောက်အကူရရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို သွားရောက်လှူဒါန်းပေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်.
FBSသည် လိုအပ်နေသူများကို အငူအညီပေးခြင်းသည်သာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်အရေးကြီးသည့် အချက်တစ်ခုဟု လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ထားပါသည်. FBSသည် နိုင်ငံအစုံမှဖောက်သည်များနှင့် ထိတွေ့ရင်းနှီးနေရသည့် ဘရုတ်ကာဖြစ်သည့်အတွက် ပရဟိတအလုပ်များနှင့် အခြားလူမှုအကျိုးပြုအလုပ်များစွာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်.